डिभोर्स भएपछि बिल गेट्सले पूर्व पत्नीलाई दिए ३ अर्ब डलर…. | Naya News Nepal
Home अन्तर्राष्ट्रिय डिभोर्स भएपछि बिल गेट्सले पूर्व पत्नीलाई दिए ३ अर्ब डलर….
डिभोर्स भएपछि बिल गेट्सले पूर्व पत्नीलाई दिए ३ अर्ब डलर….
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार २१:५७
श्रोत :अनलाइन खबर (ब्लुम्बर्गबाट)
Previous articleकोरोना नियन्त्रणको कार्ययोजना ७ दिनभित्र ल्याउन सर्वोच्चको आदेश
Next articleत्रिविमा परीक्षा नहुँदै दोस्रो वर्षको अध्यापन ! TU
सिमा नाका मा भारत संग भिडन्त ८ भरतिएय ब्यापारी र एक ससत्र प्रहरी घाइते
सिन्धुलीमा संक्रमितलाई एम्बुलेन्समै राखेर उपचार
तुलसी को महत्व